SAWIRRO: Meydadka 70 kamid maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lasoo bandhigay & hub laga furtay – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Meydadka 70 kamid maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lasoo bandhigay & hub laga furtay
June 18, 2022 Xuseen 3
Maamulka degaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan degaankaas ayaa maanta goob fagaare ah ku soo bandhigay, meydadka xubnihii argagixisada looga dilay dagaalkii shalay, saanad ciidan oo laga furtay dagaalka iyo maxaabiis nool.
Saraakiishu waxay sheegeen in la tiriyey meydadka 70 dhagarqabe, waxaana raga la dilay ku jira xubno ajaanib ah, sidoo kale waxaa nolosha lagu qabtay oo maanta fagaaraha Baxdo lagu soo bandhigay dhagarqabihii waday gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa.
Madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgalkaan geesinimada leh ku amaanay dadka reer Baxdo iyo ciidamadii kale ee u soo gurmaday, waxayna reer Baxdo dowladda dhexe iyo Galmudug ka heleen balan qaadyo garab is-taag ah.
Sidoo kale ugu yaraan 42 arday oo degaanka Baxdo ku dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta deegaankaas ku galeysa imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda, guddoomiyaha degaankaas Maxamed Cabdullahi ayaa sheegay in haatan wax cabsi ah aysan ka jirin Baxdo.
c/raxmaan al xadaari says:
waa guul weyn
Ducaale Kaahiye says:
Maasha Allah guulaysta Reer Galmudug. Caddawga Khawaarijta ah Waad ka guulaysateen laakiin waxaa Dawladeena looga fadhiyaa in Ay la gaarsiiyo taageero dhan walbo ah oo Reer Galmudug u baahan yihiin.
Aad iyo aad baan ugu kalaoonahay in Dawlada uu Madaxweynaha ka Yahay Mudane Xassan Shiekh aysan waxba ka hagran doonin Geesiyaasha Reer Galmudug.
Mustafa Jama says:
Waxaa la yaab leh, ciidamada Africa iyo kuwa dawladda Somaliyeed kama guuleystaan inta badan Alshabaab, shicibkuse mar walba waa ku guuleysta, waa su’aal waxgaradku is weydiin karo, jawaabteeduna waa caddahay. Africaanka iyo Ciidamada dawladdu kama daacad ah cidhib tirka Alshabab, waxaa ugu jira shaqo iyo xoolo badan oo lagu cuno hawlgallo been ah, waa ku dhufo oo ka dhaqaaq, magaalooyinka waaweyn ee Bu’aale, Ceelbuur, iyo kuwo kale oo badan habeen Alshaab ma haysateen haddii daacad laga yahay. Miyaanay idiinla ahayn haddii shacabka Somaliyeed iyo Alshabaab sannad qudha laysu deyn lahaa, Alshabaab waa lasoo cidhib tiri lahaa.